အသက် ၂ဝ အောက် အမျိုးသမီးများ ဆေးသောက်၍ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု များလာ ~ Myanmar Express
From : ချစ်ဆုဆွေ (ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်)ဆေးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ဆေးဝယ်ခွင့်ရရှိခြင်းကြောင့် အသက် ၂ဝ အောက် အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု ပိုမိုများပြားလာေ ကြာင်း သားဖွားနှင့်မီးယပ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကြူက ပြောသည်။ ”ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဆေးတွေသောက်ပြီး သွေးဆင်း လွန်လို့ဆေးရုံရောက်တာတွေ ပို များလာတာတွေ့ရတယ်။ လူ ငယ်မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူတွေ လွန်ကျူးမိပြီး ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့ အခါကျမှ ကြောက်လန့်ပြီး ကြား ဖူးနားဝနဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အ လွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ သွေးပုပ် ချဆေးတွေ၊ဆေးပြင်းတွေသောက် ပြီး ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချတာတွေဟာ အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်” ဟုအထက်ပါဆရာဝန်ကပြောသည်။ ယင်းသို့သော အချိန်မျိုးတွင် ဝမ်းဗိုက်ထဲရှိ ကလေးအသက် အန္တရာယ် ရှိ၊မရှိ အာရ်ထရာဆောင်း ရိုက်ကာကလေးအခြေအနေမကောင်း ပါက သားအိမ်ခြစ်ပစ်ရပြီး ကလေး ဖျက်ချပြီးမှပိုးတစ်ခုခုသားအိမ်၊ သား ဥပြွန်၊ မွေးဖွားရာလမ်းေ ကြာင်းတို့သို့ ဝင်ရောက်သွားပါက သားအိမ်ပြွန် လမ်းကြောင်းပိတ်သွားကာ နောင် အခါတွင် ကလေးရရန် ရာခိုင်နှုန်း နည်းသွားတတ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။ ထို့အပြင် ကလေးပျက် ကျလျှင်လည်း သွေးဆင်းမှုများကာ ရှော့ခ်ရပြီးအသက်အန္တရာယ်ကို ထိ ခိုက်နိုင်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။”ဒီလို ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖျက်ချတဲ့သူ တော်တော်များများ က ဆေးပြင်းတွေ၊သွေးပုပ်ချဆေးနဲ့ သား အိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်ပြီး ဖျက်ချတာ တွေများတယ်။ ကလေးဖျက်ချတာ ဟာ တချို့လည်း ဘာဆေးသောက် သောက် ပျက်ချင်မှပျက်တယ်။ အဲဒီ လိုဖျက်ချပြီးမှ မပျက်ခဲ့ရင်လည်း သွေးပုပ်ကအထက်ကိုတက်ပြီး အ သက်ကို အန္တရာယ်ပေး မှာဖြစ် တယ်။ တချို့လည်း သွေးတွေ အများကြီး သွန်တယ်။ တချို့ဆိုလည်း သွေး မဆင်းဘဲ ရောဂါပိုးက မွေးလမ်း ကြောင်းထဲဝင်ပြီး ဒုက္ခရောက်နိုင် တယ်” ဟု ၄င်းက ပြော သည်။ယင်းသို့ ကောင်းကျိုး မရှိ သော နည်းလမ်းမျိုးကို မဖြစ်ခင် ကကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ကြောင်း၊ ခေတ်လူငယ်မိန်းကလေးများ လက်မထပ်ခင်လွန်လွန်ကျူးကျူး မနေထိုင်သင့်ကြောင်းနှင့် အိမ် ထောင်သည်တွေအနေနှင့်လည်း ကလေး မလိုချင်သည့်အတွက် တားမည်ဆိုပါကလည်း သေချာ ကျွမ်းကျင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင် ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တိုင်ပင်ပြီး တား သင့်ကာတားသည့်ကြားမှ ကိုယ် ဝန်ရခဲ့ပါကလည်း မိမိသဘောနှင့် မိမိ ဖျက်ချခြင်းမလုပ်သင့်ကြောင်း ကို ၄င်းက အကြံပေးပြော သည်။ Myanmar Express
ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီ...
ဆန္ဒပြမှု အရှိန် တဖြည်းဖြည်း မြှင့်မည်
ဇူလိုင်လွှတ်တော်တွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေ တင်သွင...
မြန်မာ ဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျ...
ရန်ကုန်အမှိုက် ဂျပန် မီးရှို့စက်ဖြင့် မီးရှို့ပြီး လ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ...
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားချင်ရင် စဉ်းစား...
Facebook ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ?
စင်ကာပူ က မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာ...
ပြည်တွင်း လယ်ယာ ကဏ္ဍတွင် ဗီယက်နမ် လုပ်ငန်းရှင်များမှ...
တည်ဆဲဥပဒေအချို့ ပြင်ဆင်ရာတွင် ငွေဒဏ်နှုန်းထားပါ တစ်...
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွင် မဏိပူရပြ...
လျှပ်စစ်စက်ရုံနှစ်ရုံ ရန်ကုန်မှာ တည်မည်
Facebook နှင့် အင်တာနက် ပေါ်တွင် သမ္မတ အကြံပေး တစ်ဦ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက...
အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနမှ ကြေညာချက်ထု...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု မမှန်ပါက အကြောင်းကြား နိုင်...
ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း
မြို့ပတ်ရထား စီမံကိန်းများ အဆင့် မြှင့်တင်ရန် ယခုလ...
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ မြို့ကြီးများသို့ သွားရောက် လေ့...
ယောကျာ်းများ ထိပ်ပြောင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း တွေ့ပြီ...
အများပြည်သူ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဓါတ်အားပေးစက်မ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင...
ပြည်သူလွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သောြ...
နိုင်ငံရေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရာနှုန်းပြည့် မပါ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့ နှုန်းမှာ စိုးရိမ်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ နယ်သာလန် နိုင်ငံ၊ စလ...
နာဂစ် မုန်တိုင်းမှ ကျန်ရစ်သူများ အတွက် ကွမ်းခြံကုန...
ယခုလို ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတု တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်...
မြန်မာ့ရေတပ် ပြည်တွင်းထုတ် လေယာဉ်တင် စစ်သဘောင်္ တစ်စ...
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ စတ...
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ပြည်သူ ၆၇၆၇၆၇ ဦး လက်မှတ်ထိုး...
ဖောက်ခွဲခံရသော ရွှေလီ-မန်စံ တာဝါတိုင်များ ၁၀ ရက်အတွ...
လျှပ်စစ်မီး အရင် တောင်းသူများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
တပ်မတော်လေ့ ကျင့် ရေးအရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြ...
အလိုလိုက်ခံချင်လား အရိုက်ခံချင်လား ?
အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရဲချုပ်များ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီ...
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေဖို့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ...
Facebook နှင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာ ဥပဒေ ပေါ်လာလျှင် El...
မြန်မာပြည်သူ/သားတွေ အမှန်တကယ်ဆန္ဒပြရမှာ ဘယ်သူတွေကို...
လျှပ်စစ်မီမလာခြင်းက လူအများကို သံဿရာ တလျှောက်လုံး ...
ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ကုန်တင်ယာဉ် ၂ စီးအား ဆ...
မြန်မာ့ လေယာဉ်မှူး သင်တန်း စတင် သင်ကြား
လူ့အခွင့်အရေးအရ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့ပါက မည်သ...
အမေရိကန်မှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှု ဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့် ...
လိင်တူချစ်သူများနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ
ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ Facebook အပါ...
နိုက်ကလပ် တက်မှ ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်တဲ့မမများဖတ်ဖြစ်အောင်...
စင်ကာပူမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နေသူများ နှင့် စတေ...
အရေးပေါ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါ...
ရွှေလီ-မန်စံ ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီ...
ဇွန်လမှ စတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရ...
ဒီကနေ့ လျှပ်စစ်မီး ပြဿနာကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခြိုးခြံသုံးစွဲရေး ဂျပန်အစိုးရ ပန်...
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး အပြည့်ရရှိစေဖို့ ရုရှားနိုင်ငံ...
လူရွှင်တော်ကြီး ဇာဂနာ သို့
၂၄ နာရီ မီးအပြည့်ရစေဖို့ ထားဝယ် ကျောက်မီးသွေး လျှပ...
၂ သိန်းခွဲတန်ဖုန်းလိုင်းကို ငွေကျပ် ၁၁ သိန်းကျော်ေ...
၂၄ နာရီ မီးအပြည့်ရစေဖို့ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် အား ...
မြန်မာ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များကို G-8 ခေါင်းဆောင်တေ...
ဗီယက်နမ် ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပမည်
HIV ကာကွယ်ဆေး တွေ့ပြီ
သမ္မတကြီး မွေးနေ့ အထိန်းအမှတ် မန္တလေးတွင် ဖယောင်းတို...
ပြင်သစ်သမ္မတ ဆာကိုဇီ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ရာထူးမှနုတ်ထွက်
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုများ ဖယ်ရှားဖို့ အိုင်အမ်အ...
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ ကားများကို ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှ ...
Facebook ပိုင်ရှင် သူဌေးလေး မင်္ဂလာဆောင်ပြီ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပူးပေါင်း၍...
၆၇ နှစ်မြောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မွေးနေ့ အမှတ်တရ
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံ...